China slurry mmiri sooks Manufacture na Factory | Zebung
ZEBUNG Rubber Dredging Hoses bụ nzube e wuru maka ihe ndị pụrụ iche ndị ahịa anyị chọrọ. Anyị nọ n'ọnọdụ iji wulite nha nha sitere na 100 mm ID na ID 2200 mm. Ndị na-emepụta anyị ga-ahọrọ ihe ndị kwesịrị ekwesị site n'ọtụtụ ngwaahịa dị anyị iji nwee ike ịchọta ihe ndị chọrọ maka ọrụ na ihe ndị ahịa anyị rịọrọ ya bụ maka iyi nkwụsi ike, ogo nrụgide, ike mgbagha, ikike ikike na mpaghara ndị ọzọ.
Na mkpokọta, ZEBUNG Rubber Dredging Hoses sitere na mkpuchi nke dị n'ime nke enwere ike ịhazi iji mezuo ihe achọrọ nke onye na-ebufe ya. Ikike egosi n'ígwé nwekwara ike na-emejuputa atumatu na lining nke hoses nke ibufe abrasive ajụ.
A na-eji akwa mkpuchi ihe eji arụ ọrụ na eriri dredging, nke kwesịrị ekwesị maka ibugharị nkọ, nnukwu na ihe dị arọ dị ka coral coef, grit na weathered rock. Na-ewu na-eyi eguzogide metal, n'ime oyi akwa nwere ezi arụmọrụ nke eyi na flexing eguzogide.
Enwere ike ịkọwapụta nkọwa site na ihe ndị ahịa chọrọ.
Ne diameters ruo 1300mm, dị iche iche ogologo na mgbali àmà.
Mgbidi mgbidi ọkpụrụkpụ: site na 15mm ruo 100mm.
Abrasion na-eguzogide ma na-ekwe ekwe.
Ọ dị mfe iji wụnye, na-agbanwe iji na nchekwa.
Na-arụ ọrụ n'akuku: 0 Celsius na 45 Celsius
arụ ọrụ okpomọkụ: -20 Celsius C na 50 Celsius
Sooks dayameta: 200mm-1100mm
Flange n'obosara: 340mm-1550mm
Flange ọkpụrụkpụ: 25mm-65mm
Ne mgbidi ọkpụrụkpụ: 12mm-45mm (nwere ike ahaziri)
Oghere na flange: 8-36
Oghere oghere: 22-36mm
Anyị na-agbalị ịbụ ndị kasị mma ọmụmụ na ike ibuga ụlọ ọrụ na world.To-eme ka anyị na ngwaahịa bụghị naanị karịa ụlọ ọrụ ụkpụrụ; ma gafere ndị ahịa anyị na-achọ atụmanya.
nha NJ. WP ogologo
30nke 750mm 15bar ~ 20bar 11.8m
34nke 850mm 15bar ~ 20bar 11.8m
IHE: ID900mm & 1200mm, ndị ọzọ kwa bụ site na gị chọrọ
Nke gara aga: Na-ese n'elu mmiri Dredge sooks
Osote: Air sooks
Slurry mmiri Ihapu sooks
Mmiri Cement slurry Water sooks
Eyi eguzogide ọgwụ slurry mmiri Rubber sooks